Maansadaan la magac baxday Denbilow, waxaa curiyay Abwaan Daahir Cabdulle Deylaaf oo ku nool magaalada Stockholm ee waddanka Sweden. Waa maansadii 36aad ee Silsiladda Doodwanaag, waxayna taxanaha ku soo biirtay 15-03-2005.
Maansadu waxay iftiiminaysaa dhaqanka qarriban ee Dagaal-oogeyaasha oo iyagu ummaddoodii iyo nafsaddoodiba u horseeday halaag. Abwaanku wuxuu muujinayaa in ay yihiin dad aanan ka fiirsan cawaaqib-xumida tallaabooyinka ay qaadayaan.
Maansadu waxa ay ka digaysaa khatarta ka imaan karta in ay ummaddu wanaag ka filato qabqableyaal dagaal oo ku howlan meelmarinta danahooda gaarka ah. Dagaal-oogeyaasha oo ah kuwa aan looga fadhiyin in ay is afgarad la yimaadaan, ayaa ummadda u horseedi kara in ay cadow shisheeye gacanta u geliyaan, haddii aanan lala immaanin dadaal iyo feejignaan dheeri ah.
Nabsi inuu dul kaa jiro
iyo inuu ka soo degey
waxaa lagu dareemaa
xaqii buu dillaacshaa.
kii in doora joogoo
weli deeynin ruuxdii
ficilkii dorraad galab
duunyaduu ku keenuu
Ninkii daango dubayee
faraqii ku duubtee
hadba koox dig siiyee
ku walaaqay digadee
daasado ka buuxshee
dadweynaha ka iibiyey
laye waa la daaroo
dabcigii horeba male.
ayay oon daraaddiis
webi daanka joogoo
daad soo fatahi raba
dani tiri biyo u doon.
Markuu soo dul-joogsadey
ee darso isleeyahay
soow dacal ma furannoo
kama daadan badarkii
daadkii ma sii maran.
sow damaci muu oran
gurbiyoo ka daba bood
intaad dalaq tiraa hoos
dibaddaa u soosaar.
inuu sii darbeeyoo
ay taladi durugtoo
halis ay la deris tahay
doqonnimo ma garannine
derbiyada ku dhega oo
sow ugu danbeeyntii
dalqa-weyne muu helin!.
Kaasi waa ku daayee
doc kalena bal ila eeg.
hadba gees u didiyee
daaqii u diideen
dandarrada ka daa garan
mid ka daaman weynoon
oo duunyo iyo bahal
marna kala duweeynoo
isku wada daraayoo
wax kastaa ka dagayaan
hadduu duur cidla ahaa
dug ka soo yiraahdee
dam ka siiyo gebigood
danbigeeda yeyska leh?
Kuwaasina ku daayee
geed dahar leh weeynoo
wada deeqa xoolaha
mid harsimo u doontee
kii kale u diidee
inteey doollo riixiyo
isduqeyn ku daaheen
iyagoo dammane baas
Cadow iyo ka diimoon
kii ku daalay raadkee
weligoodba dagi jirey
daf hadduu yiraahdoo
ka soo boodo deyrkoo
wada dilo dhammaantood
ka durduurto xeyrtoo
dushoodana ku daacsado
doc kalena bal ila eeg
dadku uu ka buuxee
badda duud mareeysee
la dawaaftay hirarkee
hadduu kii duwaayiyo
ku qasbaan dabeyluhu
meelaan deked leheyn iyo
Addis ineey ka degatoo
xeeb eey ku diintaba
Balaan dulucda maansada
Docda kale ka eegnee
dadku waayihii hore
doog beey xirnaayeen
marna haragey duubteen
dib danbaa dharkaan iyo
dahab leyska lulayoo
tii hore ka duwanoo
dantoo leysla goobaa
ka ciyaartay door wacan.
waa kuwaa dushaa sare
ragga qaar u duuloo
yiri waxaan la deris nahay
dayaxaa iftiinka leh.
Duul horena maahmaah
yiri kii dabbaalee
intuu tiisa daayaco
tu nin kale daryeeloow
hadhow guuldarro iyo ciil
ha qaniinin dibintaa.
Waxaa loo danleeyahay
kii dummiyey reerkee
walaalkiis intuu diley
diyadiina weli qaba
yiri hoo duceeysane!
goobbo dalable yeeshoo
dayac tahay naftiisii.
Waxa loo danleeyahay
kii shalay duqeeyee
daash aan u reebine
derbi jiifnimada baday
yiri hoo duceeysane
asna duur cidla ahoo
duggaal aan leheyn iyo
dugsi aan heleynoo
dulugleeya meel baas.
Waxa loo dan leeyahay
midey kala durkeenoo
ka dhexeyso daannoo
deyntii horuu qabey
in lagalaba doodoo
la daawoobo aan rabin
gaajo kala dulleeysoo
inteey wada dallaabeen
midba meel ka dawarsado.
isku duub warkoo idil
waxa leyska doonayo
oo Daa'inkeen faray
dadkeennana wanaag u ah
meel aan leysku deyneyn
meel aan leysku diganeyn
meel aan leysku dacareyn
leysuna durbaan tuman
meel aan leysku derajeyn
kaasi waa dagaalyahan
meel aan leysku duuleyn
cid kastana diyaar tahay
meel aysan doobbeyn
Meel aan damaacile
meel usan dafiri karin
kii deyn islaam qabey
meel aan duqii belo
qabiil kugu damiineyn
meel aan diirka beyga leh
dirtee tahay la oraneyn
meel aan dub kii cadi
darka uusan maamulin.
Xaqoon leysi duudsiin
midey daa'in abidkiis
hal daqiiqo oo qura
dihnigiisa soo gelin
in loo diro dan guud iyo
midda howsha ugu daran
horaa looga deyrshoo
doqonnimo ma dhaaftee
nin lahow haddeer doon.
Aan daayo hadalkoo
wax kastoo dulnaga xiga
daqar baan ka filannaa
wixii damag yiraahdoo
hoos dheer ku duugmana
mugdaa loogu dowgalay.
Wax dhexoo delleganoon
marna daawo loo helin
anigu waan ku daaloo
ku dayoobey gabaygee
hasheennii durduro badan
hasheennii bilyuun deeq
hashaan abid dibboodine
doo yiri awoowgeen
hasha deelka wadatee
rag jiifaa dareershee
siinku geeyo darantii
duul baahan maqaloo
u soo dude dhankeedii
doobbigii ka buuxsade
ka durduurte dhaaydoo
doodwanaagsan gale oo
dib u eege golihii
deydaye wixii daran.
Kii silac darreeyee
dariiqeeda qodax dhigay
iyo daallimiin kale
dallaal iyo mullaal iyo
dulliyoo dhan soo hele
shir degdega ciyoon gale
deldelaad go' aanshoo
u dhawaaqe Denbiloow.
Faafin: SomaliTalk.com | Mar 30,2005